Matio 27 - Ny Baiboly
Matio toko 27
Ny nenin'i Jodasy sy ny namonoany tena - Jesoa-Kristy teo anatrehan'i Pilaty, nohelohin-ko faty - Nalevina.
1Ary nony maraina ny andro dia niara-nihevitra izay hahafaty an'i Jesoa ny lohandohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona; 2ary rahefa nafatony izy dia nentiny ka natolony an'i Pontsy Pilaty governora. 3Tamin'izay Jodasy ilay namadika azy, raha nahita fa nohelohina izy, dia nanenina ka namerina ny farantsa kely telopolo tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona 4nanao hoe: Nanota aho fa nanolotra ny rà marina. Ahoanay izany? hoy ireo, fa asanao. 5Dia natsipiny tao anatin'ny tempoly ny vola, ka lasa izy nanao tadimody nananton-tena. 6Ary nalain'ny lohandohan'ny mpisorona ny vola ka hoy izy: Tsy azo alatsaka ao amin'ny rakitra masina izany, satria vidin-drà; 7ary nony niara-nihevitra izy, dia namidiny ny sahan'ny mpanao vilany ny vola hatao tany fandevenam-bahiny. 8Izany no anaovana io saha io mandraka androany hoe Haseldamà, na hoe sahan-drà; 9ary tanteraka tamin'izay ny tenin'i Jeremia mpaminany nanao hoe: Dia nalainy ny vola telopolo, vidin'ilay notombanan'ny zanak'Israely, 10ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpanefy vilany, araka ny nandidian'ny Tompo ahy.
11Dia tonga teo anatrehan'ny governora Jesoa ka nanontanin'ny governora hoe: Hianao va no mpanjakan'ny Jody? Voalazanao, hoy Jesoa taminy; 12fa ny fiampangana nataon'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona azy no tsy novaliany kely akory, 13ka hoy Pitaly taminy: Tsy renao va izany zavatra maro iampangana anao izany? 14Fa tsy namaly izy na dia indraim-bava aza, ka gaga dia gaga ny governora. 15Ary isaky ny fetin'ny Paka dia fanaon'ny governora ny mandefa mpifatotra anankiray tian'ny vahoaka. 16Ary tamin'izay dia nisy mpifatotra anankiray malaza atao hoe Barabasy, 17ka rahefa nivory ny vahoaka, dia hoy Pilaty taminy: Iza no tianareo halefako ho anareo, Barabasy sa Jesoa izay atao hoe Kristy? 18satria fantany fa fialonana no nanoloran'izy ireo an'i Jesoa. 19Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, dia nampaniraka taminy ny vadiny hilaza hoe: Aza manao na inona na inona amin'io Lehilahy marina io hianao, fa nampahory ahy be ihany izay nanofisako azy halina izay. 20Tamin'izay ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona nahatarika ny vahoaka hangataka an'i Barabasy sy hampamono an'i Jesoa. 21Dia niteny indray ny governora nanao hoe: Iza no tianareo halefako ho anareo amin'izy roa lahy? Barabasy, hoy izy ireo. 22Ary hoy Pilaty taminy: Ahoana kosa àry no hataoko amin'i Jesoa, izay atao hoe Kristy? 23Aoka hofantsihana amin'ny hazo fijaliana izy, hoy izy rehetra. Fa inona àry no ratsy nataony e? hoy ny governora. Dia vao mainka nihorakoraka izy nanao hoe: Fantsiho amin'ny hazo fijaliana izy.
24Nony hitan'i Pilaty, fa tsy nahomby izy fa vao mainka nitombo aza ny tabataba, dia nampaka rano izy ka nanasa tànana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: Afa-tsiny amin'ny ran'io Lehilahy marina io aho; fa raharahanareo. 25Dia namaly ny vahoaka rehetra nanao hoe: Aoka ho aminay sy amin'ny zanakay ny rany. 26Tamin'izay dia nalefany Barabasy, ary Jesoa nony efa nasainy nokapohina dia natolony azy hofantsihana amin'ny hazo fijaliana. 27Tamin'izay dia nentin'ny miaramilan'ny governora ho any amin'ny toerana fitsarana Jesoa, sady novoriny hanodidina azy ny miaramila namany. 28Dia nendahany ny fitafiany ka nampitafiny kapaoty jaky izy; 29ary nandrandrana fehiloha tsilo izy ireo, dia nasatrony ny lohany, sady nampitaniny volotara ny tànany an-kavanana; rahefa izany dia nandohalika an-kila teo anatrehany izy ary naneso azy hoe: Arahaba, ry mpanjakan'ny Jody. 30Dia nororany izy, ary nalainy ny volotara ka nikapohany ny lohany. 31Nony efa nolalaoviny toy izany izy, dia nesoriny ilay kapaoty ka nampitafiny azy indray ny fitafiany, ary nentiny hofantsihana amin'ny hazo fijaliana izy. 32Rahefa tafavoaka ny tanàna, dia nifanena tamin'ny lehilahy Sireneana anankiray atao hoe Simona izy ireo, ka notereny io hilanja ny hazo fijalian'i Jesoa. 33Ary nony tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgotà izany hoe tanin'ny karan-doha, 34dia nomeny divay miharo afero izy hosotroiny; fa nony nandramany dia tsy nety nisotro izy.
35Ary rahefa voafantsika tamin'ny hazo fijaliana izy, dia nanaovany loka no fizara ny fitafiany, mba ho tanteraka ny teny nolazain'ny mpaminany hoe: Nozarainy ny fitafiako, ary nilokàny ny akanjoko; 36dia nipetraka niambina azy izy ireo. 37Teo ambonin'ny lohany dia nasiany soratra milaza ny nanamelohana azy manao hoe: ITY NO JESO MPANJAKAN'NY JODY. 38Nisy jiolahy roa niara-nofantsihana taminy tamin'ny hazo fijaliana, ny anankiray teo an-kavanany, ary ny anankiray teo an-kaviany. 39Ary izay nandalo dia nihifikifi-doha nanevateva azy 40nanao hoe: Ialahy, ilay mandrava ny tempolin'Andriamanitra sy manangana azy anatin'ny hateloana ity, vonjeo ilay ity ny tenan'ialahy; raha Zanak'Andriamanitra ialahy, mialà amin'ny hazo fijaliana. 41Ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona dia naneso azy koa nanao hoe: 42Ny sasany novonjeny, fa ny tenany kosa tsy hainy vonjena; raha mpanjakan'Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana ankehitriny, dia hino azy isika. 43Natoky an'Andriamanitra izy, ka raha tia azy Andriamanitra dia aoka hanafaka azy ankehitriny, satria Zanak'Andriamanitra aho, hoy ny filazany. 44Dia nandatsa azy toy izany iretsy jiolahy roa izay niaraka nofantsihana taminy tamin'ny hazo fijaliana.
45Ary hatramin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia rakotry ny aizina ny tany rehetra. 46Nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy, dia niantso mafy Jesoa hoe: Elia, Elia, lamma sabaktany! izany hoe: Ry Andriamanitro! ry Andriamanitro, nahoana no dia nilaozanao aho? 47Raha nandre izany ny sasany tamin'izay teo dia nanao hoe: Miantso an'i Elia ilay ity. 48Dia nihazakazaka niaraka tamin'izay ny anankiray tamin'izy ireo ka nandray sponjy; nony novontosany vinaingitra dia notohiziny volotara ka natohony azy hotsentsefiny. 49Fa ny sasany nanao hoe: Aoka hoe hozahantsika raha ho avy hanafaka azy Elia. 50Ary niantso tamin'ny feo mahery indray Jesoa, dia niala aina. 51Ary indro fa nisasaka roa hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lamba teo amin'ny tempoly; nihorohoro ny tany, nitresaka ny vatolampy, 52nisokatra ny fasana, ary betsaka ny fatin'ny olona masina efa nody mandry no nitsangana; 53ka nony efa nitsangana tamin'ny maty Jesoa dia nivoaka tamin'ny fasana izy ireo, ka niakatra tany an-tanàna masina ary niseho tamin'ny maro. 54Ilay kapiteny sy ny fehiny niambina an'i Jesoa kosa nony nahita ny horohoron-tany mbamin'ny zavatra rehetra tonga teo, dia raiki-tahotra mafy ka nanao hoe: Tena Zanak'Andriamanitra tokoa io Lehilahy io. 55Nisy vehivavy maromaro koa nitazana teny lavidavitra teny, dia ireo izay nanaraka an'i Jesoa sy nanompo azy hatrany Galilea: 56anisan'ireo Maria Madelena, sy Maria renin'i Jakoba sy Josefa, ary ny renin'ny zanak'i Zebede.
57Nony hariva ny andro, dia nisy lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia atao hoe Josefa, izay mpianatr'i Jesoa koa, 58nanatona an'i Pilaty ka nangataka ny fatin'i Jesoa. Dia nasain'i Pilaty homena azy. 59Noraisin'i Josefa ny faty, dia nofonosiny lamba fotsy madio, 60ary naleviny tao amin'ny fasana vaovao nolavahana tamin'ny vatolampy, izay nampanaoviny ho an'ny tenany. Nony nakodiany ny vato makadiry tamin'ny varavaram-pasana, dia lasa izy. 61Ary Maria Madelena, sy ilay Maria anankiray, dia teo ka nipetraka nanandrify ny fasana. 62Ny ampitson'iny izay andron'ny fiomanana, dia nivory tany amin'i Pilaty ny lohandohan'ny mpisorona sy ny Farisiana 63ka nanao hoe: Tompoko, tsaroanay fa fony mbola velona ilay mpamitaka iny dia nanao hoe: Rahefa afaka hateloana dia hitsangana aho. 64Koa asaovy ambenana ny fasany ambara-pahafaky ny andro fahatelo, fandrao sokoin'ny mpianany ny fatiny, dia lazainy amin'ny vahoaka hoe: Nitsangana tamin'ny maty izy, ka ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. 65Dia hoy Pilaty taminy: Manam-piambina hianareo, koa mandehana, ambeno araka izay hainareo. 66Nony nandeha izy ireo, dia sady nasiany tombo-kase ny vato no nametrahany mpiambina teo mba hahazoany antoka marina ny amin'ny fasana. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0179 seconds